Ukushintshwa kwamathanga omkhulu wamanje
Ngubuphi ubuchwepheshe namadivaysi afake esikhundleni sezintambo zikagogo: amathuba amathoni nezindlela ezintsha zanamuhla. Ukuphila kwendoda yesimanje kugcwele izinto ezihlukahlukene zasendlini. Kodwa-ke, kanye namahlanganisi, ama-toasters, imishini yamakhofi, ama-ionizers emoyeni kunendawo yezinsimbi zakudala. Kodwa ingabe izinsimbi zihlala zifana nalokho ezazikhona ezinsukwini zikagogo? Noma le divayisi ishintshe kakhulu?
Izici eziyingqayizivele zezingodo zesimanje
Ukunikeza izimpendulo ezifanele kule mibuzo, kudingekile ukuhlaziya amathuba amathoni yanamuhla. Eminyakeni embalwa edlule, ubuchwepheshe bokudala lezi zakhiwo zasendlini zishintshile ngokuyisisekelo. Okokuqala, lokhu kuphazamise ukuthuthukiswa kwethebhulethi yedivayisi. Amamodeli wanamuhla angaba nale nxenye kusuka:
Izinguqulo ezingavamile kakhulu ezithandwa yi-chrome kuphela. Zonke lezi zithombe zisiza kakhulu epulazini, zihlinzeka ngokukhululeka kanye nekhwalithi ephakeme yokushiya imininingwane.
Encwadini! Naphezu kwazo zonke izinto ezintsha, ikhambi eliwuthandwa kakhulu lihlala likhona emhlabathini owenziwe ngesisekelo sensimbi epholile.
Ngokuqondene namadivayisi alula kakhulu, ochwepheshe baqaphela amadivaysi ayedwa ahlonyelwe i-anodilium noma i-cermet yokugqoka. Kanye nokunethezeka okumangalisayo, ukuhamba nokuhamba kalula, amadivaysi anamuhla akhathele. Ngesikhathi se-ironing, i-sole yabo ingase ikhubazeke ngombani, imidwebo yensimbi noma izinkinobho. Izingalo zikagogo ngale ndlela ziye zaqina futhi zithembeka nakakhulu.
Ubunikazi obuphezulu kakhulu: ukuthembeka nokulula
Uma indlu inomntwana omncane futhi kufanele inake kakhulu, ke kunconywa ukuba ukhethe inguqulo ehlala isikhathi eside kakhulu. Phakathi kwezinsimbi zanamuhla zale mfanelo yizona zithombe ezibonakalayo ezenziwe nge-stainless steel noma nge-ceramics.
Iwukuphela akuyona nje umgomo wokusebenza nokuthembeka kwedivayisi. Le ngxenye inesibopho se:
Omunye umehluko oyingqayizivele phakathi kwamamodeli wanamuhla kanye nezinsimbi zakudala zakudala ukuphepha. Njengoba inikezwa ngamamanje wamanje, imishini ihlomeke kakhulu ngesistimu yokuvala ngokuzenzekelayo. I-element element yokushisa ikwazi ukuvala, egcina indlu noma ingxenye yayo kusuka ekushiseni. Lolu buchwepheshe busebenza kanjani? Konke okumangalisa ngempela okulula, kodwa kuyamangaza ukuthi kulula. Uma, emva kwe-ironing, imfoloko yedivaysi ikhohliwe ukuba ikhishwe ngaphandle kwesikhwama, kanti lochwepheshe, omele isikhathi esithile engasebenzi, uyakwazi ukushintsha ngaphandle kosizo. Bangakwazi yini ukugqoka lezi zinkuni?
Imishini entsha: ingabe izothatha indawo yezinsimbi ezivamile?
Amapayipi ayengoshintsho lwezintambo zikagogo namuhla. Abantu abaningi bashiya amadivayisi ajwayelekile ngokuqondene nalolu hlobo lwemishini.
Nakani! Ngisho ne-steamer ephelele kakhulu ayikwazi ukufaka esikhundleni sensimbi. Idivayisi ngayinye yenza imisebenzi yayo.
Amathuluzi asebenza kuphela ekucubunguleni izinto nge-steam, azoba yinto enhle kakhulu ensimbi. Lolu hlelo lokusebenza lwekhaya lungcono ngokubeka izinto ngokuhlelekile:
ngenani elikhulu lamafolda;
kusuka kwendwangu elincane.
Ngokuqondene nemindeni enezingane ezisanda kuzalwa, isixazululo esiphezulu kuzoba yinsimbi enomsebenzi wokuqhuma. Lokhu kuyindlela enhle kakhulu yokuphathwa kahle kwezinto zezingane kanye nelineni. Uma usebenzisa i-turbo mode, ungathola isibalo esiphezulu se-steam esishisayo esakwazi ukungena emigqeni ejulile yendwangu futhi uyiqondise, ukuze izinto zibe "ukuphefumula," ukukhanya, okulula kakhulu.
Technology Hot Wind- "smart" iron analogue
Nokho, hhayi kuphela ubuchwepheshe besimanje bunganikeza ukunakekelwa okuphelele kwengane, ukushintsha izingubo zangaphansi nezingubo zentsana. Abaphathi bezingane batusa ukuba basebenzise ama-napkins ahlanzekile okuhlanzekile futhi abadweba basebenzise ngokusebenzisa i-Hot Wind technology. Isici esiyingqayizivele sale teknoloji yesimanje ukuthi sekuyisibonelo esiphuthumayo sezintambo zikagogo. Izinto zokwakha ezisetshenziselwa ukwakha lezi zinwele kanye nama-diapers zicutshungulwa ngomoya oshisayo. Ngenxa yalokho, izinto zokunakekela ingane ziyathandeka kakhulu, zilula futhi zilula.
Umkhiqizo wesiNgisi uLolarlar nguye owokuqala ukwamukela lobu buchwepheshe obuyingqayizivele. Isibonelo, lapho udala amathayidi, indwangu engelona eboshwe nge-steam isho kanje. Yingakho zonke izinsana zezingane ezisanda kuzalwa zithatha ngokushesha futhi aziholeli ekucaseni. Uhlelo lwe-Hot Wind, olukhulula izintambo zangaphakathi, lunikeza induduzo enkulu. Omunye kufanele akhumbule ukuthi ubucayi, ukuvotela, okuthakazelisayo ekuthinteni yiyona into esanda kuthiwa yi-ugogo. Izakhiwo eziye zabhekana nokucubungula okunjalo azikho ngaphansi kwazo.
Izinzuzo zaloluhlobo lwe-ironing kanye nokusetshenziselwa kwezinto zangempela ngensimbi akuzona nje kuphela ukuhlinzeka ngesisa no-airiness. Lezi zinqubo zihloswe ekuvikelweni kwesikhashana kanye nokuvikeleka kwe-antibacterial. www.lovular.ru
Imithetho eyisisekelo yokuxhumana ngomakhalekhukhwini
Namathela kuSelfie: uthande noma uzonde?
Indlela yokukhetha isiqandisisi esifanele nokuthi iyiphi impawu
Indlela yokukhetha ibhodi le-ironing efanele
I-Catalog of the best vacuum cleaners 2015
Ukukhetha i-kettle kagesi: eyinkimbinkimbi futhi elula
Ikhishi Lekhishi Elihle kakhulu
Amavithamini namavithamini emzimbeni womuntu
Izifo nezinye izifo zomntwana
Isobho sezinhlanzi nge-capers
Ukugeza kokuqala kwengane, izincomo
Shibari njengendlela yokuhlukanisa impilo yezocansi
Buka i-EURO 2016 kusuka ku-NIKI - kubalandeli namadoda wangempela
I-Lemon pie ngamakhiwane
Yini okufanele uyenze ukuze ugweme ukucindezeleka?
Uzoya kuphi eholidini nengane yonyaka
Amahomori - isisekelo sokudla
Ukulala kahle komuntu omdala